admin – Page 3 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
(DAAWO SAWIRADA)Maamulka Puntland oo Maanta soo bandhigay Ciidamo gaar ah
By admin on September 11, 2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Maamulka Puntland ayaa Maanta Magalada Garoowe waxaa ay kusoo bandhigeen Ciidamo gaar ah oo la magac baxay tayeynta ammaanka Caasimadda Maamulka Puntland ee Magalada Garoowe. Wasaaradda Amniga Puntland & Saraakiisha Ciidamada ayaa waxaa ay sheegeen inay ciidamada bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah dadka hubka sharci darrada ah ku dhex wato magaalada Garoowe iyo dhalinyarada […]
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Oo Ku Baaqay In Wadahal Lalagalo Al-shabaab
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) oo u warramayey warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Saacid ayaa qiray in weli ay jirto awooda Al-Shabaab, islamarkaana ay yihiin dad Soomaaliyeed oo la kari waayey. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu qabo in wadahadal toos […]
Guddoomiyaha baarlamanka Jubbaland oo la doortay
By admin on August 17, 2019 Wararka HNN
Sabti-Ogosto-17-2019(HNN)- Doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa lagu doortay guddoonka baarlamanka Jubbaland. Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa waxaa ku tartamay labo musharax oo kala ahaa Sheekh Cabdi Maxamed C/raxmaan iyo Xuseen Shiilow Cali. Sheekh Cabdi Maxamed C/raxmaan ayaa mar kale dib loogu doortay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland, isagoo helay codod dhan 55 cod, halka Musharaxii kale […]
Golaha Wasiirrada Oo Ammaanay Guulaha Ciidanka Xoogga Dalku Kasoo Hooyeen Dagaalka Ka Dhanka Ah Argagaxisada
By admin on August 15, 2019 Wararka HNN
Khamiis-Ogosto-15-2019(HNN)- Kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirrada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ammaanay guulaha xooggan ee ciidamada xoogga dalku kasoo hooyeen furimaha dagaalka iyo howl-gallada kale ee lagu baacsanayo argagaxisada. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiisaka XFS oo ka war bixiyay kulanka oo uu guddoomiyay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa sheegay in […]
Dowladda hoose ee Baladweyne oo soo bandhigtay fursado shaqo oo ka banaan.
Khamiis-Ogosto-15-2019(HNN)- Duqa magaalada Baladweyne Marwo Safiya Xassan Sheekh Cali Jimcaale ayaa soo bandhigtay fursado shaqo oo ka banaan dowladda hoose ee magaalada Baladweyne sida agaasimaah maamulka maaliyadda , agaasimaha howlaha guud , agaasimaha arrimaha bulshada,iyo agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose. Afhayeenka dowladda hoose ee Baladweyne Nuur Maxamed Cali ayaa radio Beerlula u akhriyay warsaxafadeedka ka […]
Khamiis, Ogosto-15-2019(HNN)- Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa isbitaalka ku booqday askarta ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee shalay ku dhaawacmay weerarkii argagaxisadu ku qaaday saldhigga ciidanku ay ku leeyihiin degamada Aw-dheegle ee gobalka Shabeellada Hoose. Ra’iisul Wasaaraha ayaa maamulka Isbitaalka ka xog wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka naftood hurayaasha […]
Madaxweyne Farmaajo oo iska celiyay jinsiyadii labada ee uu ka heystay Mareykanka
By admin on August 1, 2019 Wararka HNN
khamiis-Ogosto-1-2019(HNN)- Maanta oo ay taariikhdu tahay 1-da Ogoosto, 2019, waxaan si rasmi ah idiinla wadaageynaa in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed uu celiyay jinsiyaddiisii labaad ee uu ka qaatay dalka Mareykanka. Hawshani waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku hawlanaayeen sharciyaqaanno iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha ee Soomaaliya iyo Mareykanka. […]
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Puntland ugu Hambalyeey 21 guurada ka soo wareegtay xilligii la Aasaaay
Khamiis- Ogosto- 1-2019(HNN) Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada Dowlad Gobaleedka Puntland ugu hambalyeeyay munaasabadda xuska 1da August oo ku beegan 21 sano guurada kasoo wareegtay maalintii dhidibada loo taagay. “Hambalyo, dhammaan reer Puntland. Waxaan idiinku hambalyeynayaa munaasabadda 21 guurada ka soo wareegatay markii la […]
Ugu Yaraan 12 Qof Oo Ku Geeriyootay Dab Ka Kacay Dhismo Ku Yaalla Japan
By admin on July 18, 2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
ugu yaraan 10-qof ayaa ku geeriyootay, ku-dhawaad 40 kalena wey dhaawacmeen, kadib, markii uu saakayto dab ka kacay Dhismo Istuudiyo lagu sameeyo Filimadda Dhaqdhaqaaqa ee (Cartoons) oo ku yaalla magaalladda Kyoto ee dalkaasi. Boliska waxay sheegeen in Nin 41-jir ah ayaa lagu tuhunsan yahay inuu wax dareere ah ku buufiyey Dhismaha Istuudiyaha oo ka kooban […]
Dhowr Qof Oo Surka Looga Gooyey Wadanka Masar
Saraakiisha Ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in Maleeshiyo gacan-saar la leh Kooxda Daacish ay 4 qof surka kaga gooyeen Waqooyiga Gacan-biyoodka Siinaay. Maleeshiyadda ayaa la sheegay inay shlaay weerareen koox dad ah oo ku sugnaaDegmadda Yar ee Bir Al-abdi, kadibna ay qoorta ka gooyeen 4 qof, halka qof 5-aad ay horey u afduubteen. Wararka waxay sheegeen in […]